7 Best Nootropics (Smart Drugs) na ahịa nke 2018 | AASraw
/blog/gallery/7 Best Nootropics (Smart Drugs) na ahịa nke 2018
Ihe na 08 / 31 / 2018 by Dr. Patrick Young dere na gallery.
Ọkpụkpụ ọgwụ ọjọọ
Nootropics bụ aha ọhụrụ Smart-Drugs si Silicon Valley. Ha na-ekwe nkwa ịrụ ọrụ nke ọma ma na-agbasa ngwa ngwa site na US West Coast. Ndị ọkachamara na-adọ aka ná ntị megide ihe ize ndụ nke òtù nzuzo ọhụrụ ahụ.
Noootropics, a makwaara dị ka ọgwụ ndị nwere ọgụgụ isi, ihe na-akpali akpali, na mmụba nke akpọrọ obi, bụ ọgwụ ọjọọ nke na-ebuli ụfọdụ ọrụ uche mmadụ (ọrụ na ike nke ụbụrụ) dịka cognition, ncheta, ọgụgụ isi, imepụta ihe, mkpali, anya na itinye uche. N'ọtụtụ ọnọdụ, amaghi ihe usoro nke nootropics. Ekwenyere na ọrụ nootropics na-agbanwe site n'ichegharị nchịkwa dị na ụbụrụ (neurotransmitters, enzymes and hormones), site n'ịkwalite ụbụrụ metabolism, ma ọ bụ site na ịmalite ịmalite na-eto eto (neurogenesis).
Smart Drugs akụkọ ihe mere eme
Ekwuru okwu 1972 "nootropic" site n'aka onye nkịta Romanian Corneliu E. Giurgea (1923-1995). Giurgea so tinye aha nke ihe a piracetam na 1964, bụ nke bụ ugbu a na-ama nootropics. Ọ họọrọ okwu ahụ na-atụgharị uche na okwu psychotropic.
Giurgea jere ozi dị ka Prọfesọ nke Neurophysiology na Ngalaba Nkà Mmụta Medicine na Bucharest nakwa Belgium na 1963 ghọrọ Isi nke Neuropharmacology na UCB.
Dị ka Giurgea si kwuo, nootropics bụ ọgwụ ndị na-ekerịta àgwà ndị dị mkpa nke piracetam, ya bụ:
1. Mmezi nke mmekorita nke ụbụrụ, nke na-enye mmetụta dị mma n'uche ozugbo.
2. Mmalite a ga-emetụtakarị telivishọn ma ọ pụtaghị na ụbụrụ ndị ọzọ.
3. Iji mee ka a gbanwee nsogbu nke nsogbu ụbụrụ.
Ihe ọ bụla na-enweghị ihe ọ bụla dịka akwụkwọ Giurgea nwere ike isi meziwanye cognition. Ihe na-enwe mmetụta dị mma nke na-enwe mmetụta dị mma bụ naanị ihe na-enweghị isi n'echiche nke nkọwa ahụ ma ọ bụrụ na o nwekwara mmetụta na-adịghị na nhụghasị na enweghị onwe ya na-egbu egbu. Mkpụrụ obi na-akpali akpali ndị dị ka amphetamine abụghị ndị na-ahụ maka ihe na-eme ka ha nwee ike ime ka ha nwee mmetụ ahụ, dịka ha nwere ike ijikọta ya.
Nnyocha banyere mmetụta nke nootropics ekpughewo mmetụta dị iche iche nke ọgwụ na-emepụta; ma otu ụdị mmetụta kachasị mkpa nke na-ekere òkè n'òtù ọgwụ niile abụghị nke juru. Eziokwu niile na-emetụta ọrụ cholinergic: Ịba ụba nchịkọta na-eme ka mmepụta na ntụgharị nke acetylcholine, nke na-eme na muscarinic na ndị nicotinic receptors. Piracetam na-emekwa ka njupụta nke acetylcholine nabatara nke cortex n'ihu site na 30% -40%.
Ntinye ike na ụdị adenosine triphosphate (ATP) dị oké mkpa iji lanarị ụbụrụ. Mkpịsị ule nwere ike ịnweta ATP nke ha na glucose na oxygen na enweghị ike itinye ATP site na sel ndị ọzọ. Piracetam eme ka ọrụ adenylate kinase enzyme dị, nke na-agbanwe adenosine diphosphate (ADP) n'ime ATP na adenosine monophosphate (AMP). Nke a na-ebelata nkedo nke ATP na ụbụrụ na hypoxia ma mee ka mgbake dị na hypoxia na-eme ka ọ dị elu, nakwa n'ihi mmụba nke glycolysis oxidative.
Usoro ọzọ nke ime ihe bụ mbelata nchịkọta platelet na mmụba nke mmetọ mmiri akpụkpọ anụ, nke ga-abụ site na incorporation nke phospholipids n'ime akpụkpọ ahụ.
Mmetụta mmetụta nkịtị nke ndị dị otú ahụ nootropics -agụnye:
• Nwee oke iwe ma ọ bụ ụjọ
• Nkwụsịtụ na mgbasasị na-egosi nrụgide
• ahu egwu
• Ịda mbà n'obi na nchekasị
• Ahụhụ ma ọ bụ ụra
• Nausea na vomiting
• mgbu obi
• Nwunye ma ọ bụ uru dị arọ
Mgbe ufodu, enwere uzo ma obu adighi ike, mbelata mgbali elu ma obu abawanye ma nwekwuo libido.
A na - ekenye ihe ndị na - esonụ na nootropics:
• Imegharị ọrụ nke ụbụrụ na-emetụta mmetụta uche
• Mmetụta na ụbụrụ, enweghi ike emetụta akụkụ ndị ọzọ nke ụbụrụ
• Mmelite nke mmụta
• Mmetụta na nchekwa
• Ịme ka àgwà na ncheta amụta
• Mụbaa usoro nchịkwa nke ụbụrụ ụbụrụ
• Ekpuchila mmetụta nke ọgwụ ọjọọ
• Ole na-akpata mmetụta dị ala, obere toxicity
Ụlọ ahịa n'efu nootropics
N'afọ ndị na-adịbeghị anya, ahịa nke nootropics emeela. Ọtụtụ bekee nwere nanị nnwapụta nwa oge ma ọ bụ egosipụtabeghị mmetụta ha. Mgbe ụfọdụ, ọmụmụ ihe ogologo oge banyere mmetụta ndị na-adịghị na ya na-efu. E nwere ọdịiche dị iche n'etiti ọgwụ ọjọọ na ihe ndị ọzọ. N'iji ya kwuo, ihe ọ bụla nke na-emetụta ụbụrụ nke ụbụrụ bụ onye na-arụ ọrụ na-enweghị ihe ọ bụla ma ọ bụrụ na o nwere mmetụta na-adịghị na ya ma ọ bụ na-egbu egbu. N'echiche a, ihe ndị dị ka amphetamine anaghị eso ndị nootropics dịka ọ bụ egbu egbu.
Otu ihe omuma nke nootropics bụ na ha niile na-akwado ma na-eme ka ndị na-ahụ maka mgbatị na ụbụrụ na ụda ha. "Ike nke ụbụrụ" bụ adenosine triphosphate (abk ATP), nke na-emepụta sel ụbụrụ onwe ha site na shuga na oxygen. Dịka ọmụmaatụ, piracetam simplifies ma kwalite mmepụta nke ATP n'okpuru ọnọdụ nke enweghị oxygen. Ọ na-emekwa ka ọbara na-abanye n'ụbụrụ, ikuku oxygen na shuga metabolism.
7 kacha mma Nootropics(Smart Drugs) na ahịa nke 2018
Enwere ike ịkọwa nootropics dị ka esi eji ha:
Armodafinil bụ ọgwụ sitere na ìgwè psychostimulants, bụ nke dị iche na nhazi nke ihe omimi nke sitere na amphetamine. Ọ na-anọchite anya (R) -enantiomer nke racemate modafinil.
Eji ya mee ihe maka narcolepsy, ịda mbà n'obi, ụra na-agba aghara ma ọ bụ narcolepsy na ụra buru ibu n'ụbọchị.
1. Onye nkwarụ maka nfụkasị ngwaahịa a.
2. Mmetụta ọbara ventricular nke aka ekpe, mgbanwe mgbanwe electrocardiographic, ihe mgbu obi, ọrịa arrhythmia ma ọ bụ ngosipụta nke ọgbụgba valve prorel na nkwarụ myocardial n'oge na-adịbeghị anya, ọrịa ọrịa angina na-adịghị ike.
1. A ghaghị ịgwụ ọgwụ ahụ site na obere dose (50 ~ 100mg kwa ụbọchị), 50mg kwa ụbọchị 4 ~ 5, ruo oge kachasị mma (200 ~ 400mg kwa ụbọchị).
2. A ghaghị belata nke ndị ọrịa nwere mmeju imeju dị oke njọ, na ezughị ezu na usoro ọgwụgwọ nke ndị agadi kwesịrị.
3. Nnukwu nchịkwa nwere ike ime ka ụra ehira, mgbaàmà nke mgbagwoju anya, dị ka nkwụsịtụ, nkwarụ, mgbagwoju anya, obi ụtọ, mmebi ahụ, usoro nchịkwa nwere ike ime na ọgbụgbọ, afọ ọsịsa, usoro obi nwere ike ime tachycardia, bradycardia, ọbara mgbali elu, ihe mgbu. Ngwaahịa a enweghị ngwọta ọ bụla, ọ ga-akwado ya site n'ịgbabiga ya ókè.
4. Zere ịṅụ ihe ọṅụṅụ na-aba n'anya mgbe ị na-eji ngwaahịa a.
5. A ghaghị iji nlezianya jiri ndị nwere akụkọ banyere ọrịa uche.
6. A na-emepụta nsị na-emepụta ihe dị ka C, na iji ndị inyom dị ime kwesịrị ịtụle uru na uru.
7. Enweghi ike nyochaa ọgwụ nchekwa maka ụmụaka n'okpuru 16 afọ.
1. Ọrịa isi, mgbu azụ, ọrịa-dịka ihe mgbaàmà, obi mgbu obi, mkpuchi, na nkiri olu.
2. Ọrịa ọbara ọbara, tachycardia, palpitations, vasodilation.
3. Mkpụrụ obi digestive system, afọ ọsịsa, mkpịsị mmiri, ikpo nkụ, ụkọ nri, afọ ntachi, ọrụ imeju na-adịghị mma, flatulence, ịkpụ ọnya afọ, ọnụ mmiri, akpịrị ịkpọ nkụ.
4. Eosinophilia nke hemolymphatic.
5. Egwuregwu Metabolic.
6. Nervous ụjọ usoro, ụra nhụsịrị, nchegbu, dizziness, ịda mbà n'obi, nchekasị, ikuku, hypertonia, dyskinesia, hyperactivity, agitation, mgbagwoju anya, ụjọ, enwe mmetụta uche, dizziness.
7. Rhinitis respiratory, pharyngitis, ọrịa nchịkwa, epistaxis, ụkwara ume ọkụ.
8. Akpụkpọ anụ, herpes simplex.
9. Mmetụta dị iche iche nke amblyopia, ihe ọdịiche dị anya, gbanwee uto, mgbu anya.
10. Urogenital usoro uzo urination, hematuria, pyuria.
Oral, 200 ~ 400mg kwa ụbọchị, were ụtụtụ. A ghaghị belata ụbụrụ nke imeju ume na 1 / 2 nke ọgwụ kwesịrị ekwesị.
Ọgwụ ọjọọ na-emetụta ya
1. Onye na-emechi CYP3A4 dị ka carbamazepine, itraconazole, ketoconazole ma ọ bụ phenobarbital, rifampicin CYP3A4 inducer na modafinil nwere ike igbanwe ọnụọgụ ọbara nke ngwaahịa a.
2. Ngwaahịa a bụ onye ntinye CYP3A4, nke na-ebelata ọnya ọbara nke cyclosporine site na 50% ma belata nsị plasma nke theophylline.
3. Ngwaahịa a bụ onye na-agbagha CYP2C19, nke na-eme ka ọnyá ọbara nke warfarin, diazepam na phenytoin. Ngwaahịa a nwekwara ike ịmepụta tricyclic antidepressants, chlorpromazine na omeprazole. Ọbara ọbara nke ọgwụ ọjọọ dịka lansoprazole na propranolol. Mgbe e jiri ọgwụ ndị ahụ dị n'elu mee ihe n'otu oge ahụ, a ghaghị imezi ọgwụ ahụ n'ụzọ kwesịrị ekwesị ma tinye ọbara ahụ anya.
4. Ngwaahịa a nwere ike belata mmetụta nke ọrịa steroidal contraceptives. A ghaghị iji usoro ọgwụgwọ ndị ọzọ mee ihe n'oge eji ngwaahịa a na n'ime otu ọnwa mgbe ịkwụsị ọgwụ ahụ
Modafinil bụ onye na-eme mkpọtụ nke na-eme ka a na-agwọ ọrịa dịka narcolepsy, nkwụsịtụ ụra na-ehi ụra, na ụra oke ụra na-ehi ụra na-ekpuchi. A na-ejikwa modafinil eme ihe n'èzí n'èzí nke ihe ngosi dịka onye na-emekwu ihe na-agụnye uche.
Ngwa ngwa ahụ
1. Ngwọta nke narcolepsy: narcolepsy bụ ọrịa na-akpata ọrịa nke na-amaghị ihe kpatara ya. Ihe mgbaàmà kachasị bụ na ọ pụghị ịmụrụ anya ma ọ bụ anya n'oge ehihie, ma enwere ụra ụra na njem. Ndị ọrịa anaghị enwe ike ịrịa ọrịa onwe ha. Ihi ụra na enweghị ike ibi ndụ kwesịrị. Dịka ụdị ọgwụgwọ ọhụrụ, Modafinil nwere ike ime ka ndị ọrịa kwụsị nro ụra n'ụbọchị ma nọgide na-arụ ọrụ nkịtị, ma ọ gaghị enwe mmeghachi omume ndị dịka ụda obi ụtọ. Ngwa kacha mma maka nsogbu ụra. Nnyocha egosiwo na modafinil nwere ike ime ka mgbaàmà dị mma ma belata ọnụ ọgụgụ ụra na ọnụ ọgụgụ ụbọchị n'ụbọchị n'emeghị ka oge na ụra nke ụra na-emetụta n'abalị. A na-enye ndị ọrịa 18 ọrịa na-ahụ maka ọgwụ ọjọọ na ọrịa 24 n'enweghị ihe ọ bụla na-emetụta ụbụrụ na-eme kwa ụbọchị na 200-500 mg / ụbọchị. Nsonaazụ gosiri na a na-ahụ ụra na ike ọgwụgwụ na ndị ọrịa nwere narcolepsy na narcolepsy. A na-ebelata ụra, na ọnụ ọgụgụ zuru ezu nke 83% na 71%, n'otu n'otu. Modafinil nwekwara ike igbochi dyskinesia nke uche nke ụra na-ehi ụra, meziwanye ọrụ uche, na enweghi mmetụta na nmalite, mmezi, edemede na ihi ụra nke ụra abalị, ma ọ bụ na ọ na-emetụta omume nke ụtụtụ na oge a na-agba.
2. Ngwọta nke ọrịa na-egbu egbu na-egbu egbu: Modafinil pụkwara iji ọgwụgwọ ọrịa na-egbu egbu egbu egbu. Ufodu ndi mmadu jiri uzo di iche iche na-aru ndi mmadu na-eme ihe banyere mmanya na-egbu egbu, ma duzie ule nke onu ogugu mmadu na nyocha nke neurophysiological. Nsonaazụ gosiri na modafinil mụbara ụbụrụ mgbe ọ na-aṅụ ọgwụ kwa ụbọchị, na ọnụ ọgụgụ dị irè ọgwụgwọ bụ 85%. N'ihe dị irè nke ngwaahịa a bụ 200 ~ 400 mg kwa ụbọchị, were okpukpu abụọ n'ụtụtụ na n'etiti.
3. Mee ka ọgwụ ọgwụ ọjọọ na-eme ka ahụ dịkwuo mma: n'ihi ụbụrụ dị ala nke modafinil na-eme ka ọ na-ekwe nkwa dị ka ihe nnọchiteanya maka ihe ndị ọzọ na-akpali akpali, bụ nkwalite ọgwụ ọjọọ na-enye nsogbu.
4. Maka ọgwụgwọ ọrịa mgbochi / ọrịa hyperactivity: ihe gbasara ahụike na-egosi na modafinil nwere ike imeziwanye ụmụaka nwere nsogbu mberede / hyperactivity (ADHD).
Noopept bụ peptide nootropic. Noopept enwekwu ikike ịmụta, melite ncheta, ebe ọ na-enye mmetụta na usoro niile nke usoro: nhazi, nchịkọta ma weghachite ozi. Ọgwụ na-egbochi mmepe nke anaemia n'ihi ụzụ eletriki, enweghi ụra nke na-adịghị mma, yana nkwụsị nke ihe nkwụnye na-anabata glutamatergic na central choptergic receptor.
Achọpụta ihe na-adịghị mma nke ọgwụ Noopept bụ site na ịbawanye nkwụsị nke anụ ahụ na hypoxia, ọnya na-egbu egbu ma na-akpata ọnyá. Na ọrịa strok, Noopept na-ebelata olu nke ọnya ahụ, na-egbochi ọnwụ nke mkpụrụ ndụ nke cerebellum na ụbụrụ ụbụrụ, bụ nke a na-ekpughe na ọgwụ ndị na-egbu egbu nke glutamate na ikuku oxygen free. Tụkwasị na nke a, noopept na-ebelata oke nke calcium na-ebu, na-akwalite normalization nke uru rheological nke ọbara (n'ihi fibrinolytic, anticoagulant na antiaggregatory edinam).
J147 CAS 1146963-51-0 bụ ọgwụ eji eme ihe na ọgwụgwọ Alzheimer na dementia. Otu ọgwụ ọgwụ nke a na-akpọ J147 nwere ike ịbụ nke elixir nke oge a. Nnyocha egosiwo na ọ nwere ike ịgwọ ọrịa Alzheimer n'ụzọ dị irè ma gbanwee ịka nká nke ụmụ oke. Ndị ọkà mmụta sayensị na-adị njikere ịṅụ ọgwụ maka nsogbu ụmụ mmadụ. N'oge na-adịbeghị anya, na akụkọ nyocha nke a na-ebipụta na magazin mba Aging Cell, ndị na-eme nchọpụta sitere na Salk Institute kpughere usoro nkịtị nke J147 na-arụ ọrụ. Ha chọpụtara na J147 nwere ike ịbụ protein na mitochondria. Na-agbakọta iji kwalite sel ndị toworo eto, ụmụ oke, na azụ mmiri nke na-ele obere.
Onye nchọpụta bụ Dave Schubert kwuru na n'ọmụmụ ihe a, anyị chọpụtara njikọ dị n'etiti ọgwụ ọgwụ J147 na ahụike agadi, ọrịa Alzheimer; ịchọta ihe mgbaru ọsọ J147 nwere ike bụrụ ihe dị mkpa maka ọgwụgwọ nke ịka nká. N'ihe dị ka 2011, anyị malitere ọgwụ J147, ụdị mgbanwe nke curry spry turmeric. Kemgbe mmepe nke J147, ndị nchọpụta achọpụtala na ọ nwere ike ịmeghasị nsogbu nke onye ahụ ma nwee ike ịkwalite ụbụrụ ụbụrụ ọhụrụ. N'otu oge ahụ, ọ nwere ike imebi ọrịa Alzheimer ma ọ bụ gbanwee ọrịa ahụ, ma ndị nnyocha achọpụtabeghị otú J147 si arụ ọrụ na ngwugwu.
Ọtụtụ nchọpụta elelewo mmetụta nke huperzine na ọgwụgwọ Alzheimer. O di nwute, nchoputa ule a abughi ihe bara uru, dika na otutu ikpe nani obere onu ogugu ndi ozo no, ma obu uzo ajuju ajuju.
Na nyocha nke ọtụtụ akwụkwọ nyocha, a hụrụ mmụba (ndị ọrịa Alzheimer) na mpaghara ndị a: nkà nkà, ọnọdụ zuru oke, na ihe omume kwa ụbọchị. O di nwute, enweghi ihe omumu banyere pramiracetam, mana na 10 gara aga, obughi otu omumu banyere ihe a.
Phenylpiracetam bụ onye na-ahụ maka ụbụrụ nke na-emetụta ikike iche echiche ma weere ya dị ka ihe dị nro. Dị ka aha ahụ na-atụ aro, ọ bụ mgbanwe nke piracetam, nke nwere ihe ọzọ phenyl.
N'ụzọ doro anya, ọ bụ 20-60 ugboro dị ike (na nchịkọta ihe) dị ka ihe nne na nna ya.
N'ime nnyocha nke na-atụle ihe abụọ ahụ, a na-ewere phenylpiracetam dịka ike karịa piracetam na mpaghara ndị a:
Neuroprotection, mgbochi amnesia, na mkpali.
Aha ndị ọzọ: Fonturacetam, (RS) -2- (4-phenyl-2-oxopyrrolidin-1-yl) acetamide, phenotropil, carphedone
N'ihi ngbanwe nke usoro na phenethylamine, bụ nke nwere ihe na-akpali akpali, ọ nwere ike chee na enwere njikọ nke adrenaline na ndị nabatara dopamine.
Dị ka ndị mmepe nke Phenotropil na-eme ka ọkwa ndị dị na ụbụrụ: ụbara ọbara, epinephrine, dopamine, na serotonin. Otú ọ dị, ọ dịghị enwe mmetụta ma ọ bụ ejikọta ya na GABA.
Na akwukwo nnyocha nke Amerika (ya na nro) enwere ihe omuma nke acetylcholine na ndi natara NMDA, na nchikota nke serotonin na ndi natara dopamine.
Nchedo na Akuku
Dịka ọkpụkpụ nke ọ bụla, ọ dị mma n'ahụ mmadụ; Ebumnuche nke mmetụta dị ala - ọ bụrụhaala na ọ na-ekpochapụ ya n'ụzọ kwesịrị ekwesị (lee Mmiri na Ncheta).
Phenylpiracetam ekwesịghị iwere n'oge ime ma ọ bụ na-enye nwa ara. Nakwa maka ndị ọrịa nwere imeju ma ọ bụ akụrụ imebi ọ ka mma ime n'enweghị.
Mmetụta ndị dị na mbụ nke ihe na-akpali akpali na-adịkwa, dịka: mmetụta nke nchekasị, mgbakasị, ma ọ bụ mkparị.
Ụfọdụ ndị ọrụ na-akọ isi ọwụwa. Ndị a nwere ike ime na Racetamen niile, ọ bụrụ na ụbụrụ acetylcholine erughị na ụbụrụ. Dị ka ngwọta, ị na-agbakwụnye isi ihe na-echere gị na nchịkọta gị.
Na ụrọ, a chọpụtara ọgwụ ọjọọ nke 880mg / kg ahụ dị arọ, na-egosi oke nchebe dị elu site na ọgwụ a tụrụ aro.
Dị ka ndị na-emepụta ahụ si kwuo, ọ dịghị usoro tetralogic, mutagenic ma ọ bụ ọrịa carcinogenic.
Sunifiram nwere njikọ chiri anya na Racetamen na nhazi ya, ma na-ekenye ọtụtụ n'ime ihe ndị na-enweghị ihe ọ bụla. A na-akpọsa ya dịka oge 1000 dị ka piracetam (nke dabeere na gram), na-aṅa ntị na usoro onu ogugu ziri ezi, a gaghịkwa ewere ya na ndị ọzọ nootropics ọnụ.
E mepụtara ya karịsịa dị ka ụzọ dị ala ọzọ si Unifiram.
Ọ na-achọ ịkwalite ncheta, mmụta, echiche doro anya, itinye uche, mkpali, ọhụụ na ọnọdụ.
Ọnụọgụ ọgwụ: Enweghị ọmụmụ ihe bara uru, mana e kpebiri na 5 - 10mg kwa ụbọchị dị mma maka ọtụtụ ndị mmadụ.
Sunifiram ekwesịghị ikpochapu ma ọ bụ jikọta ya na ndị ọzọ nootropics.
Ndị na-eme ogologo oge na-ekwu na ha nwere ike ịchịkwa ya, nke bụ ya mere ọ ga - eji mebie ya n'oge ọ bụla ma ọ bụ na cycles.
Ọ na - arụ ọrụ dị ka agonist AMPA ma na - eme ka mmepụta glutamine na - emepụta, na - ahapụkwa acetylcholine na corbex ụbụrụ.
Ọ bụ ezie na enweghi mmetụta ọ bụla site na nchọpụta, Sunifiram nwere ike ịkpata nsogbu ndị dị egwu dịka ụra, ụra na isi ọwụwa na-atụle nkwụsịtụ.
Bromantane bụ ihe na-akpali akpali nke na-enyere aka melite egwuregwu. Mgbe a na-eji ya otu ugboro n'izu, ahụ ekwesịghị ịmalite inwe ndidi karịa ya, ma nọgide na-eche banyere ọgwụ ahụ.
O yiri ka ọ ga-egbochi mmetụta ndị na-akpata ụra na-emetụtaghị ụbụrụ n'emebighị ikike uche. Tụkwasị na nke ahụ, n'ọnọdụ nkịtị (mgbe ụra na-adịghị) ọ nwere ike ịmalite ịmụrụ anya na ikike ịrụ ọrụ.
A ghọtaghị usoro usoro nke modafinil. A na-ekwenye na ọ ga - eme ka ọtụtụ ndị na - ahụ maka igwe na - emepụta ụbụrụ na ụbụrụ.
Bromantane na-emewanye arụmọrụ na mpaghara ụfọdụ, dị ka nchekwa ọrụ, ncheta oge ogologo na ikike iche echiche.
Bromantane nwere ike belata mmetụta nke ọgwụ ụfọdụ site n'ịgba ọsọ ha. Ndị a gụnyere: itraconazole, ciclosporin, temazepam, amitriptyline, erythromycin.
Ọ bụrụ na a na-ewere ndị na-ahụ maka ọbara dị ka aspirin ma ọ bụ warfarin, ị kwesịrị ịchọrọ mgbe niile ịkpụkọta ọbara gị.
Armodafinil, bụ mmiri siri ike. Aha 2 - [(R) - (diphenylmethyl) sulfinyl] acetamide nke na-enwe usoro ihe omuma nke C 15 H 15 NO 2 S nwere ogo mole nke 273.35000 na ebe agbaze nke 156 ka 158 C. Amofenib bụ ọgwụ na-akpali akpali, a na-ejikarị ya eme ihe maka ọgwụgwọ nke ụbụrụ, ịda mbà n'obi, ụra na-agba aghara ma ọ bụ narcolepsy n'ụbọchị.
Ụdị ọgụgụ isi: C 15 H 15 NO 2 S
Onu ogugu oke: 273.35000
Ezigbo mma: 273.008200
Njirimara nke anụ ahụ
Ụdị na àgwà: ọcha siri ike
Density: 1.283G / cm 3
Ebe na-agbaze: 156-158oC
Isi okwu: 559.1oC na 760mmHg
Ihe ngosi Flash: 292oC
Ntughariri ihe omuma: 1.645
Mgbagwoju anya: 1.56E-12mmHg na 25C
Ngwaahịa a nwere ike ime ka ọrụ ụbụrụ ụbụrụ dịrị na ọgwụgwọ ma mee ka ọrụ akwara dị n'akụkụ dị iche iche nke ụbụrụ. Ngwaahịa a na-emepụta obi ụtọ yiri nke ọzọ na-akpali akpali usoro, na-eme ka ọnọdụ, mmetụta, echiche na mmetụta uche dịkwuo mma. Ihe ntụgharị nke ngwaahịa a nwere ike ịbụ site na mgbakwunye nke glutamine synthetase, nke na-ebelata mmepụta nke gamma-aminobutyric acid (GABA) ma na-akwalite mmechi na ike metabolism nke mkpụrụ ndụ akwara.
Ngwaahịa a ngwa ngwa ma tinyechaa ya kpamkpam mgbe ọ na-elekọta ya. Ncheta plasma ruru ọnụ ọgụgụ dị elu banyere 2 ruo 4 awa. Ihe oriri anaghị emetụta ngwaahịa bioavailability, ma ọ nwere ike ịkwụsị ịṅụ ọgwụ ọjọọ ma jiri oge 1 h. A na-ekesa ngwaahịa a n'anụ ahụ, nkasike nkesa dị ka 0.9L / kg, nke dị elu karịa nha anụ ahụ dum 0.6L / kg. Mkpụrụ ndụ plasma protein bụ 60%, nke a na-ejikọta ya na plasma albumin. Mgbe nchịkwa nke 200 mg kwa ụbọchị, ịṅụ ọgwụ ọjọọ plasma ruru ala ala, ọ dịghị emetụta protein protein plasma nke warfarin, diazepam, na propranolol. Modafinil bụ usoro usoro P450 cytochrome nke CYP3A4 n'ime imeju. Ya mere, ngwakọta nke CYP3A4 na-arụ ọrụ ma ọ bụ onye na-emechi ihe ga-emetụta ọbara ọbara na oge ọrụ nke ngwaahịa a. Ngwa a na-emeju afọ na imepụta abụọ metabolites, modafinic acid na modafinilone, nke na-enweghị ọgwụgwọ ọgwụgwọ. Akaụntụ Metabolite maka 90% na ọgwụ ndị nne na nna na-akwadoghị na-erughị 10%. A na-ekpuchi ọgwụ ahụ site akụrụ, na nkwụsị nke ọkara ọgwụ ahụ bụ 10-15 awa. Ọnụ ọgụgụ ndị na-eto eto na-aṅụ ọgwụ ọjọọ dị elu karịa nke ụmụ okorobịa, ọnụ ọgụgụ ndị agadi na-akwụkwa dị nnọọ nta karịa nke ndị na-eto eto.
Ebe na-agbaze: 164-166 C
Modafinil nwere ike ime ka ọnụ ọgụgụ dị elu nke ọnụ ọgụgụ nkịtị dị elu. EEG nyochaa site na nkeji mbụ gaa na 22nd hour mgbe ụda modafinil na-egosi na uru α / θ na-egosipụta ncheta dị elu, na mgbe ụfọdụ, ụbụrụ obere ụra na-agagharị. Maka ụra nke ndị mmadụ na-ehi ụra, ihi ụra ehi ụra nwere ike ime ka ndị mmadụ nwee ncheta na ike ịrụ ọrụ ala.
Iwere modafinil nwere ike ime ka ọnọdụ a dị mma. Nnyocha e mere egosiwo na mgbe ụra nke ụra gasịrị, na-ewere 200 mg nke modafinil, ikike nke psychomotor nke ndị ọrụ afọ ofufo dị nnọọ elu karịa nke nke placebo ahụ; n'oge ihe efu nke 60, awa 8 niile Dalfene 200 mg ka na-enwe ike ịchekwa ụra nke ihi ụra na ọnọdụ obi ụtọ, nke mere na ha nọgidere na-enwe nchekwube na ike ịrụ ọrụ. Modafinil nwekwara mmetụta ụfọdụ na-adịghị mma. A chọpụtawo ya n'ụdị anụmanụ nke ụbụrụ ụbụrụ nke modafinil nwere ike ime ka ọ dị mma na-emepụta 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine.
Mmetụta na-adịghị mma na-eme ka mgbaàmà ahụ kwụsịlata. E gosipụtara mmetụta na-adịghị ahụkebe nke modafinil na ụdị ọnya mgbochi na-emepụta striatum na ụdị mmerụ ahụ na-agwọ ọrịa, n'otu n'otu. A na-ejikọta ihe dị mkpa nke modafinil na ọnụ ọgụgụ nke neurotransmitter na-emechi, GABA, ma na-achịkwa serotonin (5-HT) na norepinephrine. Ihe omumu a choputara na otiti nke modafinil puru ibu site na mmuta nke glutamine synthetase, si otú a belata mmepụta nke GABA, ma kwalite mmezi na ike mmekorita nke nerve.
Ngwaahịa a ngwa ngwa ma tinyechaa ya kpamkpam mgbe ọ na-elekọta ya. Ncheta plasma ruru ọnụ ọgụgụ dị elu banyere 2 ruo 4 awa. Ihe oriri anaghị emetụta ngwaahịa bioavailability, ma ọ nwere ike ịkwụsị ịṅụ ọgwụ ọjọọ ma jiri oge 1 h. A na-ekesa ngwaahịa a n'anụ ahụ, nkpa nkesa dị ka 0.9L / kg, dị elu karịa mmiri ahụ dum .X6L / kg. Mkpụrụ ndụ plasma protein bụ 60%, nke a na-ejikọta ya na plasma albumin. Mgbe nchịkwa nke 200 mg kwa ụbọchị, ịṅụ ọgwụ ọjọọ plasma ruru ala ala, ọ dịghị emetụta protein protein plasma nke warfarin, diazepam, na propranolol.
Modafinil bụ usoro usoro P450 cytochrome nke CYP3A4 n'ime imeju. Ya mere, ngwakọta nke CYP3A4 na-arụ ọrụ ma ọ bụ onye na-emechi ihe ga-emetụta ọbara ọbara na oge ọrụ nke ngwaahịa a. Ngwa a na-emeju afọ na imepụta abụọ metabolites, modafinic acid na modafinilone, nke na-enweghị ọgwụgwọ ọgwụgwọ. Akaụntụ Metabolite maka 90% na ọgwụ ndị nne na nna na-akwadoghị na-erughị 10%. A na-ekpuchi ọgwụ ahụ site akụrụ, na nkwụsị nke ọkara ọgwụ ahụ bụ 10-15 awa. Ọnụ ọgụgụ ndị na-eto eto na-aṅụ ọgwụ ọjọọ dị elu karịa nke ụmụ okorobịa, ọnụ ọgụgụ ndị agadi na-akwụkwa dị nnọọ nta karịa nke ndị na-eto eto.
4. Ngwaahịa a nwere ike belata mmetụta nke ọrịa steroidal contraceptives. A ghaghị iji usoro ọgwụgwọ ndị ọzọ mee ihe n'oge eji ngwaahịa a na n'ime otu ọnwa mgbe ịkwụsị ọgwụ ahụ.
Enweghị ihe ọ bụla a na-eme na nhazi nke phenylacetylproline, cycloprolylglycine na phenylacetic acid. Ọkara ndụ nke noopept ruru 0.38 awa.
CAS O. 157115-85-0
Ụdị ọgụgụ isi nke C17H22N2O4
N'ihu 318.37 dị arọ
A naghị ejikọta noopept n'ime ahụ.
Usoro nke ihe omimi nke ọgwụ na-adabere n'ikike ya iji mepụta cycloprolylglycine yiri nke a na-ejikọta na dipeptide cyclic cyclic.
Nkwadebe Noopept na-eme ka njigide nzaghachi nke transcallosal, na-eme ka mmekọrịta dị na ya na ogo nke ọdịdị dị n'etiti ụbụrụ.
Mgbe ị na-eji ọgwụ Hoenopt, mgbake ọrụ arụ ọrụ, belata n'ihi craniocerebral trauma, enwere mmerụ ahụ, yana ịchọrọ ischemia zuru ụwa ọnụ na ụwa.
Na ndị ọrịa nwere ọnya anụ ahụ nke usoro nhụjuanya nke etiti, mmetụta nke ọgwụ Hoenopt na-amalite na 5th-7th ụbọchị ọgwụgwọ. Ná mmalite nke ọgwụgwọ ahụ, nchekasị na mmetụta ụfọdụ na-akpali akpali nke ọgwụ Hoenopt ka a na-akpọkwu, gụnyere mgbatị na nchekasị na ụra nke ndị ọrịa. Mgbe izu 2-3 gasịrị mgbe mmalite nke ọgwụgwọ, enwere ọganihu dị mma na ọrụ nlegharị anya.
Noopept nwekwara mmetụta nke osisi (na-ebelata isi ọwụwa, tachycardia na orthostatic ọrịa).
N'ihi na ọgwụ Hoenopt abụghị nke teratogenic, mmetụta ahụ na-empootoxic na mutagenic. Noopept anaghị akpata ụtaba, mgbe nkwụsị nke ọgwụgwọ na ndị ọrịa ọ dịghị mmepe nke ọrịa ịdọrọ.
Mgbe nchịkwa ọnụ, ọ naghị etinye aka na ya na tract digestive. Ọdịdị nke na-enweghị ọrụ ruru 99.7%. Akụkụ ahụ na-arụ ọrụ na-abanye na mgbochi ụbụrụ ọbara, ebe ọ na-etinye aka n'ime mmiri synovial karịrị ụbụrụ plasma.
A na-enweta nlezigharị plasma kacha elu n'ime minit 15 mgbe nchịkwa ọnụ.
A naghị eji ọrụ ọ bụla na-agwọ ndị ọrịa dịgasị iche iche (ndị toro eto na ndị agadi) na-enwe nsogbu na enweghị mmetụta nke ọdịdị dịgasị iche iche. Karịsịa, ọgwụ Noopept nwere ike ịhazi mgbe ụbụrụ ụbụrụ na-arịa ụbụrụ, na ndị ọrịa ndị na-arịa ọrịa ụbụrụ (gụnyere encephalopathy nke dị iche iche etiologies) na ọrịa asthenic.
Enwere ike ịhọpụta noopept iji welie ọrụ nlekọta (ebe nchekwa, ike na ikike mmụta) maka ndị ọrịa nwere nrụgide anụ ahụ, nke ọgụgụ isi na nke uche.
Usoro nke ngwa
Noopept bụ maka iji okwu ọnụ. A ga-ewere mbadamba nkume mgbe nri, na-aṅụbiga mmiri ókè ma ọ bụ tii mmiri a na-ejighị aka. Ná mmalite nke ọgwụgwọ, dịka iwu, họpụta 10 mg nke noopept ugboro abụọ n'ụbọchị. Ọ bụrụ na enweghi ike ekwupụta na ọgwụgwọ ahụ zuru ezu ma ọ bụ ndị ọrịa na-anabata ọgwụ Hoenopt, a na-amụba ọgwụ ahụ na 10 mg ugboro atọ n'ụbọchị.
J147 CAS 1146963-51-0 bụ ezinụlọ nke Racetame; Ihe ndị dị na otu a yiri nke ahụ, ma dị iche na njirimara ha.
350.34 g · mol-1 na-agba agba
All Racetams nwere ike ịgafe ihe mgbochi ụbụrụ ọbara (na ọkwa dị iche iche); Pramiracetam nwere ihe kachasị abụba abụba nke a maara nke ọma Racetame, nke ahụ na-etinyekwa ya n'ahụ ngwa ngwa - ikekwe n'ihi ike ya gafere okpukpu abụọ okpukpu abụọ.
Ụfọdụ ndị nnyocha na-eche na ọ bụ 5-10x dị ike dị ka ihe a maara nke ọma " Piracetam ".
Ọ dị iche na nke ụmụnne ya site n'ikike ọ na-amụba ịta. Tụkwasị na nke ahụ, ọ nwere ụdị ọrụ Racetam ndị ọzọ, dịka ụba ebe nchekwa na ikike mmụta.
A kwenyere na ọdịdị yiri nke ahụ na phenethylamine bụ maka ọrụ mmetuta. N'ebe a, ọtụtụ n'ime nchọpụta ahụ mere naanị ndị na-arịa ọrịa mberede nke ọrịa strok ma ọ bụ ụbụrụ merụrụ ahụ.
Ndị ọrịa na-arịa ọrịa na-arịa ọrịa na-arịa ọrịa na-arịa ọrịa kwa ụbọchị nke 200mg hụrụ mmụba n'ime nsogbu nchegbu, ihe mgbu, na ịda mbà n'obi.
Ihe omumu ndi ozo choputara nbawanye na ncheta na oge anya.
O nwere ike ịbụ na ndị na-eme ka ọkpụkpụ na-akpọrọ ihe na-eme ka ọ bụrụ ihe na-eme ka piracetam bụrụ akụkụ nke ọdịdị ahụ.
Ọ bụ ezie na ndị ọkà mmụta sayensị ejighị n'aka kpọmkwem usoro nke piracetam, ha kwenyere na mmụba cell na mmiri glutamate na-akpata mmetụta.
Enwere ọtụtụ akụkọ si n'aka ndị ọrụ na-ezo aka nhazi ngwa ngwa nke nnwere onwe na mmetụta na-akpali akpali nke phenylpiracetam.
N'ụzọ na-adọrọ mmasị, a chọpụtara na mgbanwe ụfọdụ na-adịghị edozi anya: ụmụ anụmanụ ndị na-arụ ọrụ nke sunifiram amụbawo phosphorylation nke mkpụrụ ndụ dị iche iche na ụbụrụ, nke nwere njikọ chiri anya na mmụta na ntinye ncheta.
Molar mass 246.304 g / mol
A kewara ụmụ anụmanụ abụọ na-eme nchọpụta gaa n'ìgwè abụọ: Otu ọkara duru Sunifiram, onye nke ọzọ enweghị ihe ọ bụla. N'ikpeazụ, a na-anwale ikike icheta nke ụmụ anụmanụ site n'enyemaka nke Y-maze na a nwalere ihe nnwale ihe.
E nwetara nkwubi okwu a: Ụmụ anụmanụ nyere sunifiram nwere nsonaazụ kacha mma.
Mmetụta Sunifirams na ịda mbà n'obi: Enweghị ọdịiche dị n'etiti òtù abụọ ahụ. N'ụzọ na-adọrọ mmasị, ọtụtụ n'ime nyocha ndị dị na ịntanetị na-egosi nrụpụta antidepressant.
Ihe omumu nke mbu bu akuko abuo abuo:
1. Ọdịdị nke Sunifiram yiri nke nke Amp Ampines ndị ọzọ. Ọ na-arụ ọrụ site na ịmepụta ndị na-anabata AMPA. N'ime nkuzi na-akpa ọchị, a na-enye ndị anụmanụ mbụ NBAQX AMPA. Mgbe nri Sunifiram nye ụmụ anụmanụ, o yiri ka ọ gbanwee mmetụta nke NBQX. Dịka agonist AMPA ọ nwere ike melite ebe nchekwa, ikike mmụta, oge anya na anya.
2. Ma ọ bụghị ya, sunifiram yiri ka ịhapụ acetylcholine na corbex ụbụrụ. Dị ka akụkụ cholinergic, ọ nwere ike melite ncheta oge dị mkpụmkpụ, ncheta oge ogologo, na nkà na ụzụ. Iji gosipụta mmetụta a, a ghaghị ịmalite ịmụtakwu ọmụmụ ihe.
N'ime nchọpụta nke chọpụtara na uru anyanwụrịrị (0.001 mg / kg kacha dị irè uru), ọ dịghị mmetụta ọhụụ nke a hụrụ na ọgwụ nrịba nke 1 mg / kg.
O di nwute, enweghi omumu omumu, dabere na omuma ndi ozo. General Sunifiram bụ karịa na usoro azịza kwesịrị ekwesị n'enweghị ihe ọ bụla, ma ọ dịghị ụzọ a ga-esi edozi ya ma ọ bụghị ya na ndị ọzọ nootropics.
A na-atụ aro ka ị ghara iji Bromantane karịa 3 ugboro n'izu. Nakwa na oriri na-adịru ogologo oge, ị ga-eme ya n'emeghị ya.
Code CAS: 87913-26-6
Nchịkọta ọgwụ ọjọọ
Ihe nootropics abụghị:
• Ị gaghị aghọ ụbụrụ buru ibu n'otu ntabi anya, dịka na fim ahụ "enweghị oke". Were ya dị ka mgbakwunye nke ị nwere ike iji mee uru.
• Nootropics anaghị edochi maka iri nri, mmega ahụ, na ụra zuru oke.
• Na nyocha nke IQ anaghị atụ anya na ọ ga-abawanye oke.
Kedu ka ọgwụ ọjọọ si eme?
Arụ ọrụ Nootropics site na ịgbanwe ihe ndị na-esonụ:
Mmetabolism obi, ikuku oxygenation nke ụbụrụ, inwe ụbụrụ ụbụrụ, eto eto.
Ụdị mmetụta ahụ dabere na nkwadebe.
Kedu mgbanwe ndị a ga-atụ anya?
Dabere na ihe ahụ, a pụrụ ịtụ anya mmezi n'akụkụ ndị a:
• ike itinye uche
• nchekwa ebe nchekwa
• ike ịmụta ihe
• nchekwa ọrụ
• Okwu okwu / okwu
• Ike iji dozie nsogbu (eche echiche)
Na mgbakwunye na nzụlite anụ ahụ nwere ike iji mgbanwe dị mma na-ehi ụra, nchekasị nchekasị, nsogbu nchekasị, ihere, egwu egwu, ụjọ na mkpali na-atụ anya ya.
Bụ Nootropics Agụmakwụkwọ?
Na-ekwu okwu siri ike: ee e. Maka mkpali dị ka caffeine, sulbutiamine, na modafinil, nke ahụ bụ akụkọ ọzọ.
Oge ruo mgbe mmalite nke mmetụta
Enweghị ike ikpochapụ nke a, ọ dabere na ngwaahịa, na onye ọrụ. Ihe ndị na-esonụ bụ ụda na ọ nwere ike ịdị iche.
Ndị na-atụgharị anya / ndị na-amụ anya (caffeine, modafinil, wdg) - n'ime 30 nkeji ruo ọtụtụ awa.
Ngwurugwu Na-edozi Nri (Creatine, Omega-3) - Na-emekarị n'ime 4 ruo 8 izu.
Piracetam - N'ime 2 - 4 izu. A ghaghị ịgba ọsọ ule maka ọ dịkarịa ala izu abụọ.
Ihe 8 kachasị na-enwe mmekọahụ na-akpata ọgwụ ọjọọ na ụwa	Ọnụ ọgụgụ kachasị elu nke 10 kachasị mma nke Loss Powder